ज्ञानेन्द्र शाही भन्नुहुन्छ – राजा विरेन्द्रको खुट्टामा दाम चडाउने ओलीले ठुलो कुरा गर्न सुहाउँदैन ।
चैत १३, काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले राजा विरेन्द्रको खुट्टामा दाम चडाउने ओलीले ठुलो कुरा गर्न नसुहाउँने बताएका छन् ।
उनले भने– हिजो एउटा बढो गजबको एउटा कुरा सुने नेकपा एमालका अध्यक्ष एवं पूवप्रधानमन्त्री केपी शर्मा आली ज्यूले भन्नु भएछ जरै देखि उखलेर फालेको जाहानियतन्त्रका मान्छेहरु आजकाल जुरुकमुरुक उठाई राख्नु भएको छ ।
भनेर भन्नु भएछ, जनताले फालेको भन्नु भए छ, झुट बोल्नु भए छ, पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्यू तपाई त्यही व्यक्ति हो २०५१ सालमा राजा विरेन्द्रको खुट्टामा दम चडाएको व्यक्ति हो ठुलो कुरा गर्ने सुहाउँदैन ।
तपाई त्यही व्यक्ति हो राजाको आशिर्वादमा राजाको खुट्टामा दम चडाएर झापाबाट वि’रोध योग्यमान ठेक्का दिएर १४ वर्ष जेल बसेको बेला राजा विरेन्द्रले यो मान्छेले राजनीतिक, ह-त्या ग¥यो पनि ह-त्यारा भएपनि १४ वर्ष जेल बसिसक्यो अब
यसलाई छोड्नु पर्छ भनेर छोडाएको गुन बिर्सिनु भो? तपाईलाई एउटा साथ दिने विरेन्द्र तपाईलाई यो कुरा हेक्का रहोओस् ! अर्को कुरा के भन्नु भएछ राजाले के गरे? ए केपी शर्मा ओली ज्यू जुन भूमिमा आज तपाई टेक्नु भएको छ त्यो भूमि राजाले रचेको जुन भूमिमा बसेर केपी शर्मा ओली नेपाली भन्नुहुन्छ त्यो नेपाल पनि यही राजाले बनाईदिएको हो ।
जुन अस्पतालमा उपचार गर्नु हुन्छ राजाले बनाई दिएको हो । जुन विमानस्थल प्रयोग गर्नु हुन्छ त्यो पनि राजाले बनाई दिएको हो । जुन सडकमा तपाई कुदनु हुन्छ नि त्यो पनि राजाले बनाई दिएको हो, जुन संसद भवन भित्र तपाई बस्नु हुन्छ नि त्यो पनि राजाले बनाई दिएको हो ।
तपाईहरु जस्ता देशद्रोहि जन्मायो यही हो राजाको गल्ती सबै भन्दा ठुलो यो कुरा हेक्का रहोओस् । बोल्दा खेरी जहीले पनि जिब्रोलाई कहाँ कुन ठाउँ के बोल्ने भनेर बोल्ने आज सम्म मैले यस्तो कु-लंघार छोरा चाही देखेको थिइन ।
अर्को कुरा आफ्नै जन्म दिने बाउलाई त बाउले के गरीस भनेर सोध्यो भने बाउको एउटै मात्र जवाफ हुन्छ । त जस्तो कु-लंघार छोरा पाए, त्यही भएर राजाका बि-रुद्धमा बोल्ने होईन उनले भने । यिनीहरुलाई एउटा भोट नहाल्नुस यिनीहरु आफै पागल भएर डिप्रे-शन’को औषधी र गो-ली खाएर पागा-ल खाना जान्छन् । -दैनिक न्युज नेपाल बाट
२०७८ चैत्र १४, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 89 Views